ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်... (အပိုင်း -၁၂) - For her Myanmar
ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်… (အပိုင်း -၁၂)
နောက်ပြီး ကိုတို့ ချစ်ပွဲဝင်ဖို့ ထား ငြင်းဆိုရတဲ့ အကြောင်းပြချက်က ဘာလဲ ထား..
“ထား ကို ကိုယ် တောင်းပန်စရာရှိတယ်။”
“ပြောလေ ကို။ ကို ဘာပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ ထား ခွင့်လွှတ်ပြီးသားပါ။”
“ထားရယ်…။ ကို လေ ထား အပေါ်အေးတိအေးစက် ဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့ ထား နောက်ကွယ်မှာတော့ ကို နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေခဲ့မိတယ်။ ကို့ အပြစ်တွေ ကြီးမားတယ်ဆိုတာ ကိုနားလည်ပါတယ်။ ကို့ကို ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့လည်း မတောင်းဆိုဝံ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထားရယ်…။ ထား ကို ကို တောင်းပန်ပါတယ်။”
ထားသည် ဘာစကားမှ မပြောဘဲ အကြာကြီး ငိုင်နေသည်။ ထား စိတ်ထဲ တစ်ခုခုကို တွေးနေပြီလို့သူထင်သည်။
“အဲဒီကိစ္စတွေ ထား သိနေပြီးသားပါ ကို။”
“ထား သိတယ်ဟုတ်လား။ ဘယ်လိုသိတာလဲဟင်။”
“ထားတို့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဆဌမအာရုံလို့ခေါ်ရမလား။ ကို ထားနောက်ကွယ်မှာ တခြား မိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့အတူရှိနေတာကို ထား အလိုလို သိနေခဲ့တယ်။ ကို့အဝတ်တွေကို လျှော်ဖို့ ထား ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကို့အဝတ်တွေမှာ ကို့ရဲ့ ကိုယ်နံ့အပြင် တခြား မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရေမွှေးနံ့ကို ထား ရတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကိုမသိအောင် ထား စုံစမ်းခဲ့ရတယ် ကို။ ထား တစ်ယောက်တည်း ငိုကြွေးခဲ့ရတွေ နေ့ရက်တွေပါ ကိုရယ်။”
Related Article >>> ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်…. (အပိုင်း -၁၁)
“ကို တောင်းပန်ပါတယ် ထား။ အထိအတွေ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ဘဲ တဏှာ ရာဂကို ရှေ့တန်းတင်ခဲ့မိတာပါ ထားရယ်။ ဒါ ကို့အပြစ်ပါ။ ကို တောင်းပန်ပါတယ်။”
“ဟင့်အင်း။ ကို့ အပြစ်တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ဆို ထား အပြစ်တွေလည်း ပါပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ကို့အပေါ်အပြစ်မတင်ခဲ့ဘဲ ခွင့်လွှတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။”
“အဲဒီကိစ္စတွေကို ကိုတို့ မေ့ပစ်လိုက်ကြရအောင်နော်။ အခုက စပြီး အရင်လို နွေးနွေးထွေးထွေး ပြန်နေပြီး အေးချမ်းတဲ့ ဘဝလေးကို ပြန်တည်ဆောက်ကြ ရအောင်နော်။ ကို့ကို ခွင့်လွှတ်ပေးတာကိုလည်း ထားကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်”
“ထား မေ့ထားခဲ့တာ ကြာပါပြီကိုရယ်။ ပြီးခဲ့တာတွေပြန်တွေးနေလို့လည်း အကျိုးမှမရှိဘဲ။”
“ထား ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကို သိချင်တာ ရှိနေသေးတယ် ထား။”
“တစ်ခါတစ်လေ ထား ကို့အပေါ် အေးတိအေးစက် ဆက်ဆံတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ နောက်ပြီး ကိုတို့ ချစ်ပွဲဝင်ဖို့ ထား ငြင်းဆိုရတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ကို သိချင်သေးတယ်။”
သူ့မေးခွန်းဆုံးတော့ ထားက ရယ်သည်။
“လူတစ်ယောက်အကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ထား အကြောင်းကို ကို ဘယ်လောက် သိတယ် ထင်လဲ။”
“ထား ဘာတွေကြိုက်တယ်၊ ဘာတွေ မကြိုက်ဘူးဆိုတာလောက်တော့ ကို သိပါတယ်။”
“အဲဒါ အပေါ်ယံပဲ ရှိတာပါကို။ ထား အကြောင်း မပြောနဲ့။ ကို့အကြောင်းတောင် ကို သေချာမသိဘူးမလား။ ထားလည်းဒီလိုပဲ ကို။ ထား အကြောင်း ထား သေချာမသိဘူး။ အဲ့လို ငြင်းလိုက်ရတာ ကို့မှာ ပြဿနာရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ထား ဘက်က စိတ်မပါတဲ့အချိန်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။ ထားတို့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ အရုပ်တွေ မဟုတ်ဘဲ ခံစားချက်နဲ့ အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေပဲ မဟုတ်လား ကို… ထားမှာလည်း ထားမလိုချင်ရင် ငြင်းဆန်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရှိတယ်လို့ ထားခံယူတယ်လေ… ”
“ဘာအတွက်လဲ ကို။ ကို ဘာလုပ်ခဲ့ လုပ်ခဲ့ ထား ခွင့်လွှတ်တယ်လို့ ပြောပြီးသားပါ။ ထား ဘက်က မပေးနိုင်တာကို ပေးနိုင်တဲ့လူရှိလို့ ကို သွားယူတယ်လို့ပဲ ထားခံယူပါတယ်။ ထား အပေါ်သည်းခံပြီး ကွာရှင်းခွင့် မတောင်းခဲ့တာကိုပဲ ထား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”
“မဟုတ်ဘူး ထား။ ကို တောင်းပန်တာ ထား အပေါ် အရုပ်တစ်ရုပ်လို ဆက်ဆံမိခဲ့လို့ပါ။”
“ရပါတယ် ကိုရယ်။ ပြီးခဲ့တာတွေ ပြီးပါစေတော့။”
အရာအားလုံးကို ခွင့်လွှတ်ပေးနေသော၊ ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်သော ထားကို ကြည့်ရင်း သူ နောင်တတို့ ပိုပို ဖိစီးလာခဲ့သည်။ ထားကဲ့သို့သော ဇနီးမျိုးသည် သူ့အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဆိုသည်ကို နောက်ကျမှ သိခဲ့ရသော သူ့ကိုယ်သူလည်း ခွင့်မလွှတ်နိုင်… သို့သော်…
နောကျပွီး ကိုတို့ ခဈြပှဲဝငျဖို့ ထား ငွငျးဆိုရတဲ့ အကွောငျးပွခကျြက ဘာလဲ ထား..
“ထား ကို ကိုယျ တောငျးပနျစရာရှိတယျ။”
“ပွောလေ ကို။ ကို ဘာပဲလုပျခဲ့လုပျခဲ့ ထား ခှငျ့လှတျပွီးသားပါ။”
“ထားရယျ…။ ကို လေ ထား အပျေါအေးတိအေးစကျ ဆကျဆံခဲ့ပမေဲ့ ထား နောကျကှယျမှာတော့ ကို နောကျတဈယောကျနဲ့ ဖောကျပွနျနခေဲ့မိတယျ။ ကို့ အပွဈတှေ ကွီးမားတယျဆိုတာ ကိုနားလညျပါတယျ။ ကို့ကို ခှငျ့လှတျပေးဖို့လညျး မတောငျးဆိုဝံ့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ထားရယျ…။ ထား ကို ကို တောငျးပနျပါတယျ။”
ထားသညျ ဘာစကားမှ မပွောဘဲ အကွာကွီး ငိုငျနသေညျ။ ထား စိတျထဲ တဈခုခုကို တှေးနပွေီလို့သူထငျသညျ။
“အဲဒီကိစ်စတှေ ထား သိနပွေီးသားပါ ကို။”
“ထား သိတယျဟုတျလား။ ဘယျလိုသိတာလဲဟငျ။”
“ထားတို့ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ဆဌမအာရုံလို့ချေါရမလား။ ကို ထားနောကျကှယျမှာ တခွား မိနျးကလေး တဈယောကျနဲ့အတူရှိနတောကို ထား အလိုလို သိနခေဲ့တယျ။ ကို့အဝတျတှကေို လြှျောဖို့ ထား ယူလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ကို့အဝတျတှမှော ကို့ရဲ့ ကိုယျနံ့အပွငျ တခွား မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ရမှေေးနံ့ကို ထား ရတယျ။ ဒါနဲ့ပဲ ကိုမသိအောငျ ထား စုံစမျးခဲ့ရတယျ ကို။ ထား တဈယောကျတညျး ငိုကွှေးခဲ့ရတှေ နရေ့ကျတှပေါ ကိုရယျ။”
Related Article >>> ပွနျဆုံဖွဈခဲ့ရငျ…. (အပိုငျး -၁၁)
“ကို တောငျးပနျပါတယျ ထား။ အထိအတှကေို့ မလှနျဆနျနိုငျခဲ့ဘဲ တဏှာ ရာဂကို ရှတေ့နျးတငျခဲ့မိတာပါ ထားရယျ။ ဒါ ကို့အပွဈပါ။ ကို တောငျးပနျပါတယျ။”
“ဟငျ့အငျး။ ကို့ အပွဈတဈခုတညျး မဟုတျပါဘူး။ တကယျဆို ထား အပွဈတှလေညျး ပါပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့လညျး ကို့အပျေါအပွဈမတငျခဲ့ဘဲ ခှငျ့လှတျနိုငျခဲ့တာပါ။”
“အဲဒီကိစ်စတှကေို ကိုတို့ မပေ့ဈလိုကျကွရအောငျနျော။ အခုက စပွီး အရငျလို နှေးနှေးထှေးထှေး ပွနျနပွေီး အေးခမျြးတဲ့ ဘဝလေးကို ပွနျတညျဆောကျကွ ရအောငျနျော။ ကို့ကို ခှငျ့လှတျပေးတာကိုလညျး ထားကို ကြေးဇူးအမြားကွီး တငျပါတယျ”
“ထား မထေ့ားခဲ့တာ ကွာပါပွီကိုရယျ။ ပွီးခဲ့တာတှပွေနျတှေးနလေို့လညျး အကြိုးမှမရှိဘဲ။”
“ထား ပွောတာ မှနျပါတယျ။ ဒါနဲ့ ကို သိခငျြတာ ရှိနသေေးတယျ ထား။”
“တဈခါတဈလေ ထား ကို့အပျေါ အေးတိအေးစကျ ဆကျဆံတာ ဘာဖွဈလို့လဲ။ နောကျပွီး ကိုတို့ ခဈြပှဲဝငျဖို့ ထား ငွငျးဆိုရတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှေ ကို သိခငျြသေးတယျ။”
သူ့မေးခှနျးဆုံးတော့ ထားက ရယျသညျ။
“လူတဈယောကျအကွောငျး၊ အထူးသဖွငျ့ ထား အကွောငျးကို ကို ဘယျလောကျ သိတယျ ထငျလဲ။”
“ထား ဘာတှကွေိုကျတယျ၊ ဘာတှေ မကွိုကျဘူးဆိုတာလောကျတော့ ကို သိပါတယျ။”
“အဲဒါ အပျေါယံပဲ ရှိတာပါကို။ ထား အကွောငျး မပွောနဲ့။ ကို့အကွောငျးတောငျ ကို သခြောမသိဘူးမလား။ ထားလညျးဒီလိုပဲ ကို။ ထား အကွောငျး ထား သခြောမသိဘူး။ အဲ့လို ငွငျးလိုကျရတာ ကို့မှာ ပွဿနာရှိလို့မဟုတျပါဘူး။ ထား ဘကျက စိတျမပါတဲ့အခြိနျလညျး ဖွဈခငျြဖွဈနတေတျလို့ပါ။ ထားတို့ မိနျးကလေးတှဆေိုတာ အရုပျတှေ မဟုတျဘဲ ခံစားခကျြနဲ့ အသကျရှငျနတေဲ့သူတှပေဲ မဟုတျလား ကို… ထားမှာလညျး ထားမလိုခငျြရငျ ငွငျးဆနျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေး ရှိတယျလို့ ထားခံယူတယျလေ… ”
“ဘာအတှကျလဲ ကို။ ကို ဘာလုပျခဲ့ လုပျခဲ့ ထား ခှငျ့လှတျတယျလို့ ပွောပွီးသားပါ။ ထား ဘကျက မပေးနိုငျတာကို ပေးနိုငျတဲ့လူရှိလို့ ကို သှားယူတယျလို့ပဲ ထားခံယူပါတယျ။ ထား အပျေါသညျးခံပွီး ကှာရှငျးခှငျ့ မတောငျးခဲ့တာကိုပဲ ထား ကြေးဇူးတငျပါတယျ။”
“မဟုတျဘူး ထား။ ကို တောငျးပနျတာ ထား အပျေါ အရုပျတဈရုပျလို ဆကျဆံမိခဲ့လို့ပါ။”
“ရပါတယျ ကိုရယျ။ ပွီးခဲ့တာတှေ ပွီးပါစတေော့။”
အရာအားလုံးကို ခှငျ့လှတျပေးနသေော၊ ခှငျ့လှတျပေးနိုငျသော ထားကို ကွညျ့ရငျး သူ နောငျတတို့ ပိုပို ဖိစီးလာခဲ့သညျ။ ထားကဲ့သို့သော ဇနီးမြိုးသညျ သူ့အတှကျ တနျဖိုးမဖွတျနိုငျဆိုသညျကို နောကျကမြှ သိခဲ့ရသော သူ့ကိုယျသူလညျး ခှငျ့မလှတျနိုငျ… သို့သျော…
Tags: Apologize, fiction, Fun, love, Past, series, Time, travel
Moe February 18, 2019